Tapaka tamin’izany fa hampisam-bola amin’ireo vehivavy manao fandraharahana eto Afrika (AFAWA) ny filoha frantsay Macron sy ireo filoham-panjakana mikambana ao amin’ny G7. Hampiroborobo ny fandraharahana ataon’ny vehivavy afrikanina no tanjona ary ny Banky Afrikanina ho amin’ny fampandrosoana (BAD) no tompon’antoka amin’ny famoahana ny vola. Nanambara ihany koa i Macron, izay sady filohan’ny G7 fa vahaolana ho an’i Afrika izao, indrindra amin’ny sehatra fandraharahana sy Banky. Maro be mantsy ireo vehivavy mpandraharaha no efa nampiaka-peo tamin’ny niatrika ny fivorian’ireo mpitondra afrikanina tamin’ny janoary 2015 ny amin’ny fahasarotan’ny fahazoana famatsiam-bola ampiasaina, hany ka tsy mahalia lalana irery izy ireo ary sempotra tanteraka anaty fandraharahana atao noho ny tsy fisian’ny famatsiam-bola. Etsy an-daniny dia nilaza ny filohan’ny BAD, Adesina Akinwumi fa tsy azo ihodivirana intsony ny fandraharahana ataon’ny vehivavy amin’izao fotoana izao ary izy ireo mihitsy no ho avin’ny kaontinanta afrikanina. Ny 30%-n’ny orinasa Madinika sy Salantsalany mantsy dia efa tantanan’ny vehivavy avokoa eto Afrika ary misy fatiantoka 42 miliara be izao ataon’ny mpandraharaha lehilahy izao tokony hotsentsenan’ny mpandraharaha vehivavy haingana amin’izao fotoana izao.